Sargaal sare oo katirsanaa Al-Shabaab oo isku dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSargaal sare oo katirsanaa Al-Shabaab oo isku dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya
April 24, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Aadan Cabdi Maxamed oo loo yaqaan “Aadan Cobe”. [Isha Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sargaal sare oo katirsanaa Al-Shabaab ayaa isku dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka.
Sargaalka is dhiibay ayaa magaciisa lagu sheegay Aadan Cabdi Maxamed oo loo yaqaan “Aadan Cobe”, kaasoo Talaadadii iska soo dhiibay meel u dhow magaalada Baardheere ee gobolka Gedo.
Cobe ayaa xillal kala duwan kasoo qabtay maleeshiyada Al-Shabaab, oo ay ku jiraan xubin kamid ah guddiga shuurada, iyo madaxa arrimaha bulshada. Hadda waxa uu ahaa madaxa saadka Al-Shabaab ee gobolka Jubbada Hoose, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda.
Cobe ayaa horey uga mid ahaa Maxaakiimtii Islaamiga kuwaasoo maamuli jiray koonfurta Soomaaliya muddo lix bilood ah sanadkii 2006.